Saturday May 14, 2022 - 15:28:38
Dhaq dhaqaaqyo siyaasadeed oo aad u xooggan ayaa ka jira magaalada Muqdisho xilli saacado kooban ay ka harsanyihiin waqtiga ay dhacayso doorashada madaxtinimada.
Siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa wada gulufkii ugu dambeeyay oo ay ku doonayaan in ay uga adkaadaan madaxweyne Farmaajo, Hoteellada ku hareeraysan Makka Al Mukarrama iyo garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaa ka socda kulamo siyaasadeed oo ay musharrixiintu ku xod-xodanayaan xildhibaannada baarlamaanka cusub.
Musharixiinta ugu cad-cad ayaa xalay soo gaba gabeeyay bandhigyadoodii siyaasadeed waxayna muujiyeen in ay guul ka gaari doonaan doorashada berri oo Axad ah ka dhici doonta teendhada Afisyooni.
Max'med Cabdullaahi Farmaajo,Xasan Sheekh Maxamuud,Saciid Cabdullahi Deni iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ah kuwa loo saadaalinayo in ay ka gudbaan wareegga koowaad.
Xildhibaannada baarlamaanka ayaa helaya lacago boqolaal kun dollar ah oo laaluush ahaan ay ubixinayaan musharrixiinta xildoonka ah,boorsooyin lacag ah ayaa la sheegay in lagasoo dajiyay garoonka diyaaradaha caalamiga ah.
Dowlado carbeed iyo kuwa reergalbeedka ah ayaa saameyn ku leh doorashada DF-ka, doorashadii dhacday 2017 ayay dowladda Qadar soo saaratay musharrixii ay wadatay oo ahaa Farmaajo.
Dhinaca kale Aadan Madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ayaa Teendhada Afisyooni kulan kula qaatay saraakiisha ugu sarraysa ciidamada shisheeyaha ATMIS.
Abiy Axmed iyo Hoggaamiyaha Jabhadda TPLF oo soo dhoweeyay doorashada Xasan Gurguurte.